Sidina misimisy kokoa eo Vietnam sy India
Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Sidina misimisy kokoa eo Vietnam sy India
Mba hamaly ny fiakaran'ny vidin'ny dia an-habakabaka eo anelanelan'i Vietnam sy India ary koa manerana ny faritra, dia nanambara làlana mivantana vaovao telo i Vietnam fa mampifandray ireo ivon-toerana telo lehibe indrindra ao Vietnam, Da Nang, Hanoi, ary Ho Chi Minh City, miaraka amin'ny toe-karena roa lehibe indrindra any India. ivon-toerana politika sy kolontsaina, New Delhi ary Mumbai.
Ny zotra Da Nang - New Delhi sy Hanoi - Mumbai dia hanomboka hiasa manomboka amin'ny 14 Mey 2020 miaraka amin'ny zotram-piaramanidina dimy isan-kerinandro ary sidina telo isan-kerinandro. Ny zotra Ho Chi Minh City - Mumbai dia hiasa sidina efatra isan-kerinandro manomboka amin'ny 15 May 2020.
"Faly izahay fa hanohy hampifandray ny toerana misy an'i Vietnam amin'ny tsena misy mponina 1.2 miliara mahery any India taorian'ny nahazoana valiny tsara momba ny sidina roa mivantana nataontsika izay nampifandray ny tanànan'i Ho Chi Minh sy i Hanoi amin'ny New Delhi," hoy izy Filoha lefitra Vietjet Nguyen Thanh Son.
“Ny ora sidina mihoatra ny adiny dimy isaky ny tongotra, sy ny fandaharam-potoanan'ny sidina mety mandritra ny herinandro, ny làlam-pifandraisana vaovao any Vietnam sy India dia hamorona fotoana maro ara-barotra sy fizahan-tany eo amin'ny firenena roa tonta, manampy amin'ny fampiroboroboana ny toekarenan'izy roa tonta. Ny fanitarana ny tambajotram-sidina Vietnamjet ho any India dia manamafy ihany koa ny fanoloran-tenan'ny zotram-piaramanidina hanampy hatrany ireo mpamily amin'ny fitsitsiana ny vidiny sy ny fotoana. Ny mpandeha dia afaka mankafy sidina amin'ny fiaramanidina vaovao sy moderina antsika, ary mandray sidina fitaterana mankany amin'ny toerana malaza manerana an'i Azia atsimo atsinanana, ao anatin'izany i Malaysia, Indonesia, Singapore, Thailand ary firenena maro hafa, noho ny tambajotram-pisidinan'ny sidina Vietnamjet any amin'ny faritr'i Asia Pacific, ”hoy ihany izy. .
Ireo mpitsangatsangana izay maniry fatratra ny hahita toerana maro loko any India dia afaka manoratra tapakila amin'ny alàlan'ny fantsona ofisialy rehetra ao anatin'izany ny tranonkalan'i Vietjet, www.vietjetair.com, ny fampiharana finday Rivotra Air ary Facebook www.facebook.com/vietjetmalaysia (tsindrio fotsiny ny kiheba "Booking"). Ny fandoavam-bola dia azo atao mora amin'ny carte Visa / MasterCard / AMEX / JCB / KCP / UnionPay.
Any Vietnam Afovoany, i Da Nang dia tsy manana moron-dranomasina mahafinaritra ihany fa koa manintona fizahan-tany malaza eran'izao tontolo izao, toy ny Golden Bridge, Ba Na Hills, Dragon Bridge, sy ny maro hafa. Io tanàna io koa dia vavahady mankamin'ny toerana maro lova malaza eto amin'ny firenena, ao anatin'izany ny tanànan'i Hoi An, ilay tanàna mimanda taloha tao an-tanàna Hue, ilay lava-bato lehibe indrindra Son Doong ary toerana maro hafa mahaliana. Mandritra izany fotoana izany, i Hanoi sy Ho Chi Minh City no ivon-toerana ara-politika, ara-bola, ara-toekarena ary ara-kolontsaina roa lehibe indrindra any Vietnam, manolotra mpizahatany fifangaroana toerana ara-tantara, hetsika ara-kolotsaina, safidy fiantsenana tsy mampino, fisakafoanana cosmopolitan ary koa sakafo an-dalambe mahatalanjona.
Tao anatin'izay taona faramparany izay, India dia nanjary iray amin'ireo toerana mahaliana indrindra any Azia noho ny fisian'ireo kolontsaina, fivavahana, culinary ary fizahan-tany fizahan-tany. Ankoatry ny renivohitra New Delhi mampino, Mumbai, fantatra taloha amin'ny anarana hoe Bombay, dia manompo amin'ny iray amin'ireo ivontoerana ara-bola sy ara-toekarena manan-danja indrindra any India ary toerana tena mahavariana amin'ny zony manokana. Inde koa dia fanta-daza amin'ny maha tany taloha sy mahasarika olona manana harena maro amin'ny lova ara-kolotsaina, fety maro loko ary toerana ara-pivavahana manan-tantara.
Miaraka amin'ny fanampiana ireo zotra telo vaovao, dia ho lasa mpandraharaha manana zotra mivantana indrindra eo anelanelan'ny firenena roa tonta i Vietjet, manolotra làlana mivantana dimy avy sy mankany India. Ny zotram-piaramanidina dia miasa amin'izao fotoana izao ny serivisy HCMC / Hanoi - New Delhi amin'ny sidina efatra isan-kerinandro sy sidina telo isan-kerinandro.
Amin'ny maha-safidin'ny seranam-piaramanidina ho an'ny vahoaka azy, dia manohy manavao hatrany ny fironana momba ny dia lavitra hatrany i Vietnamjet mba hampidirana fotoana manidina vaovao amin'ny olona maro kokoa amin'ny vidiny mirary. Ilay mpitatitra vaovao dia nametraka programa antsoina ihany koa "Arovy ny planeta - Manidina miaraka amin'i Vietjet", izay misy andiana hetsika manan-danja, toy ny "Andao hanadio ny ranomasina", "Hetsika manohitra ny fako plastika", ary hetsika maro hafa, hanampy amin'ny famoronana planeta maitso ho an'ny olombelona rehetra ary hiarovana ny tontolo iainana ho an'ny taranaka ho avy.
Fandaharam-sidina sidina vaovao manelanelana an'i Vietnam sy India:
Flight Kaodin'ny sidina Frequency Departure
(Ora eo an-toerana) Arrival (Ora eo an-toerana)
Da Nang - New Delhi VJ831 Sidina 5 / herinandro Mon, Wed, Thu, Fri, Sun 18: 15 21: 30
New Delhi - Da Nang VJ830 Sidina 5 / herinandro Mon, Wed, Thu, Fri, Sun 22: 50 5: 20
Hanoi - Mumbai VJ907 Sidina 3 / herinandro Tue, Thu, Sat 20: 20 23: 30
Mumbai - Hanoi VJ910 Sidina 3 / herinandro Wed, Fri, Sun 00: 35 6: 55
HCMC - Mumbai VJ883 Sidina 4 / herinandro Mon, Wed, Fri, Sun 19: 55 23: 30
Mumbai - HCMC VJ884 Sidina 4 / herinandro Mon, Tue, Thu, Sat 00: 35 7: 25